खानपान तथा अस्वस्थ्य जीवनशैलीका कारण बढ्दैछ मुटुरोग : डा. निकेशराज श्रेष्ठ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १३, २०७८ समय: ७:३४:२१
बिराटनगर / पुर्वाञ्चलमा डा. निकेशराज श्रेष्ठ कुनै अपरिचित नाम होईन । पुर्बाञ्चलकै पहिलो सिनियर कन्स्ल्टयाण्ट ईन्टरभेशनल कार्डियोलोष्टिका रुपमा उनी परिचित रहेका छन । स्वीटजरल्याण्डबाट अध्यायन सकेपछि सुनसरीको धरानस्थित बिपि प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनी हाल मोरङको बिराटनगरस्थित न्यरो अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन ।
नेपालमा पछिल्लो समय बढदै गएको मुटु रोगका बारेमा मुटुरोगका लक्षण,बच्चे उपाय र रोग लागेपछि के गर्न सकिन्छ र मुटु रोग लागिहालेमा के कस्ता प्रबिधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ लगायत मुटुका बिरामीलाई राज्यले र अस्पताले कस्तो सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । साथै डा.श्रेष्ठको सामाजिक योगदान र रिसर्चका बिषयमा गरिएको भिडियो कुराकानी :
विशेषगरी मुटुरोग दुई कारणले हुन्छ, एउटा भित्री वा मुटुको भागमा समस्या सिर्जना भएर र अर्को बाहिरी क्रियाकलापले । भित्री कारण भनेको धड्कनसम्बन्धी समस्या, ब्लकेज आदि हुन् । बाहिरी कारण धूम्रपान, मध्यपान, कोलेस्ट्रोल, ब्लडप्रेसर बढ्नुलगायत हो । थाइराइड, सुगर, मोटोपना आदि कारणले पनि मुटुरोग हुन्छ ।
मुटुको पम्पिङ कमजोर हुने, चालमा गडबडीलगायतको समस्या आएमा त्यसलाई मुटुरोग भनिन्छ । रगतको कमी हुँदा पनि मुटु ढुकढुक हुने समस्या हुन्छ । उसो त थाइराइडका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । यी मुटुरोगका लक्षण हुन् । यो बुझ्न जरुरी छ कि लक्षण नै मुटुरोगचाहिँ होइन । वंशाणुगत कारण पनि मुटुरोग लाग्न सक्छ । यस्तो कारणले मुटुरोग लाग्नेलाई जन्मिनेबित्तिकै लक्षण देखिन्छ । तर, कसैकसैलाई भने ४०/५० वर्षको उमेरमा पनि मुटुरोग लाग्न सक्छ । मुटुको चाल अकस्मात् घटबढ हुने, पेसमेकर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा पनि मुटुरोग लाग्छ ।
मुटुका मांसपेशीसम्बन्धी समस्याका कारण पनि मुटुरोग लाग्ने गर्छ । जसले गर्दा हार्ट फेलियर नै हुन्छ । मुटुको मांसपेशी कमजोर, रक्तसञ्चार अनियन्त्रित भएमा मुटु कमजोर हुन जान्छ र रोग लाग्छ । मुटुको भल्बसम्बन्धी समस्याका कारण पनि मुटुरोग लाग्ने गर्छ । भल्बले एउटा चेम्बरबाट अर्को चेम्बरमा सजिलै रगत जान दिने तर फर्किन नदिने काम गर्छ । भल्बमा समस्या आएमा यस्तो प्रक्रियामा असर पुग्छ र मुटुरोग लाग्न सक्छ ।
मुटु ढुकढुक हुने, मुटुको चाल छिनछिनमा गडबडी भएको अनुभूति हुने । स्वाँस्वाँ हुने । मुटुरोगीलाई खासगरी एक्सरसाइजको वेला अत्यन्त बढी स्वाँस्वाँ हुने गर्छ । हर्ट फेलियर भएका व्यक्तिलाई पनि यस्तो समस्या हुन्छ । मुटुरोग लागेमा खुट्टा, अनुहार, पेट सुन्निने हुन्छ । बेहोस हुनु पनि मुटुरोगको लक्षण हो । मानिस दुई कारणले बेहोस हुन्छ, एउटा छारेरोग र अर्को मुटुरोग । त्यसैले बेहोस हुनेबित्तिकै यसको पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ । मुटुरोग भएमा निकै थकाइ लाग्छ, जुन असामान्य हुन्छ ।
१. अहिले मुटुरोगबारे मानिस निकै सचेत छन् । जसका कारण सामान्य रोग लागेको आवस्थामा पनि मुटुरोग भएको आकलन गरी जाँच गर्छन् । यसबारे निकै अनुसन्धान पनि भएका छन् र मुटुरोगसम्बन्धी डाक्टरको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कसैको अचानक मृत्यु भएको अवस्थामा मुटुरोगको अड्कल गरिहाल्छन् । तर, पहिला–पहिला यस्तो घटना भइहाले पनि मुटुरोगले नै हो भन्ने पत्तो हुँदैनथ्यो । काेभिडकाे कारण रगत बाक्लाे बनाउने हुनाले फाेक्साे पश्चात मुटुमा यसकाे प्रभाव धेरै हुने गरेकाे पाइएकाे छ ।
३. जति उमेर बढ्दै गयो, त्यति मुटुरोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा महिला ५५ र पुरुष ४५ वर्षभन्दा बढी भएमा मुटुरोग लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । पछिल्लो समय मानिस प्रविधिका कारण अलि बढी बाँच्ने गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा पनि मुटुरोगीको संख्या बढ्न गएको छ ।
मानिसले समयमै मुटुरोगको पहिचान गर्न सक्यो भने यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । यति धेरै प्रविधिको विकास भइसकेको छ कि समयमै उपचार गराउन सकेमा जस्तोसुकै मुटुरोगीको उपचार सम्भव छ । समयमै उपचार नपाउँदा मात्र यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने हो ।